Yiza uhlale kwiB&B yosapho lwethu kanye kumbindi wedolophu yaseYeghegnadzor kwiintaba ezintle zaseMazantsi eArmenia. Imizuzu nje embalwa ukusuka kumbindi wedolophu kunye neevenkile ezinkulu ezininzi, yonwabela indawo yabucala kunye neyokuphumla enemibono entle yangaphandle!
kukho iivenkile ezinkulu ezimbini ezikufutshane.Indlu ikwi-500 yeemitha ukusuka embindini
Indawo ebizwa ngokuba yi-B&B yosapho, yiza eShushan ukuze ufumane inkcubeko yase-Armenia yokwenyani enosapho olunothando nolufudumeleyo lonwabileyo ukunceda ukwenza amava akho okuhamba axabiseke.
I-Yeghegnadzor sisixeko esincinci kuMazantsi eArmenia, kwiphondo laseVayots Dzor, elikhaya lezidiliya ezininzi ezidumileyo kunye neendawo zokuthengisa iwayini eArmenia. Indlu yethu ekumgama wemizuzu embalwa ukusuka edolophini, inamagumbi aliqela alungiswe kakuhle anamagumbi okuhlambela ahlukeneyo. Indlu ineyadi entle kunye negadi eyenziwe kakuhle. Kukho umbono omangalisayo wepanoramic yeentaba ezijikeleze isixeko.
Ukutya kwethu kumnandi. Sinikezela ngokutya okuyinyani kwe-Armenian kwisidlo sakusasa. Sikwabonelela ngeepastries ezenziwe ekhaya kunye neejam, kwaye ngokuqinisekileyo ezinye iintlobo zewayini yaseAreni elidume ngayo iphondo. Iindwendwe zethu zithanda umoya opholileyo kunye nobumnandi bendlu. Iyadi kunye neendawo zegadi ziyamangalisa ukuchitha ixesha elithile ngeengokuhlwa zasehlotyeni.
Ngexesha ngalinye, kukho izinto ezininzi onokuzenza kwi-Vayots Dzor provice, kubandakanywa ukuhamba, ukutyelela inkcubeko, imikhosi yabantu, ukupheka kunye nokubhaka i-masterclasses. Senza ii-masterclasses kwindlu yethu ngokwemfuno, kwaye sinokulungiselela ezinye iintlobo zokuzonwabisa, njengoko kuyimfuneko, malunga nommandla.
Siyakuthanda ukuba neendwendwe kwaye samkela ngokufudumeleyo abantu abavela kuzo zonke iindawo zehlabathi.
UShushan uyakuvuyela ukubonelela ngokutya okumnandi okuphekwe ekhaya kwaseArmenian (ngentlawulo encinci enokuxoxwa), ngelixa umyeni wakhe uGagik unokukuthatha ngemoto ukuya kuzo zonke iindawo zenkcubeko nezembali zasekuhlaleni.